Gawaarida tareenka Thai ee loogu talagalay bukaanada COVID-19 ee aan lahayn AC ama Musqulo
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » Gawaarida tareenka Thai ee loogu talagalay bukaanada COVID-19 ee aan lahayn AC ama Musqulo
Caafimaadka Warka • News • Dib-u-dhiska • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Wararka kala duwan
Gawaarida Tareenka ee Thai Bukaanka COVID-19
Ma jirto qaboojiye iyo musqulo… weli. Taasi waa waxa bukaannada COVID-19 ee asymptomatic-ka ah ay wajahayaan marka la dhigo waaxdooda go'doominta-baabuurta tareenka ee la beddelay.
Thailand bukaannada COVID-19 ee Bangkok oo sugaya u gudbinta xarun daaweyn ayaa lagu go'doomin doonaa baabuurta tareenka ee la beddelay.
Xaruntan go'doon waxaa laga dhisayaa saldhigga tareenka korontada ee Bang Sue Grand Station.
Shaqadu waxay sii wadaa rakibidda shabaq kaneecada iyo musqulo dibadeed iyo sidoo kale isku xirka gawaarida korontada iyo biyaha.
Maamulka Magaalooyinka Bangkok (BMA) iyo Tareenka Gobolka ee Thailand (SRT) ayaa hadda ka shaqeynaya inay xarun go'doomin u furaan bukaannada COVID-19 ee saldhigga korontada ee Bang Sue Grand Station.
Guddoomiyaha Thailand Pol. Gen. Aswin Kwanmuang ayaa sheegay in xaruntu ay u ahaan doonto xarun horudhac u ah bukaannada COVID-19 ee asymptomatic-ka ah ee ku sugan Bangkok oo sugaya u gudbinta xarun daweyn.
Waxaa jira 15 gaadhi oo hurdo oo aan hawo lahayn oo hadda loo rogay waaxyo go'doon ah. Gaadhi kasta wuxuu qaadi karaa ilaa 16 bukaan, iyadoo la isticmaalayo sagxadda hoose. Waxaa la qabanayaa hawlo lagu rakibayo daaqadaha muraayadaha kaneecada, lagu xirayo gawaarida korontada iyo nidaamka biyaha, iyo sidoo kale rakibidda musqulaha dibadda.
Wuxuu sheegay in mashruucan uu bilaabay Wasiirka Gaadiidka Saksayam Chidchob, kaasoo faray Tareenka Gobolka ee Thailand iyo Maamulka Magaalooyinka Bangkok inay si wadajir ah u dhisaan xarun karantiil bukaan.